Home Wararka Gud. hore ee Gobolka Gedo oo loo diiday in uu ka dhoofo...
Guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji (Macalimu) ayaa sheegay in loo diiday in uu ka dhoofo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Macalimu ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda NISA ay ka dambeeyaan xayiraadiisa, isla-markaana laga hor istaagay inuu aado gobolka Gedo iyo qoyskiisa.
Macalimuu ayaa intaas ku duray in ay talabadaani muujineyso in amniga dalka aan si sax ah loogu wareejin ra’iisul wasaaraha, taasina ay beenowday, sida uu hadalka u dhigay. “Dalku wuxuu galay jawi doorasho, waxaana Madaxwayne Farmaajo uu masuuliyadii nabadgalyada iyo doorashada gacanta u galiyay Raysalwasaare Rooble, balse waxaa muuqata in taasi ay beenowday oo amni la wareejiyay aysan jirin. Sababtoo ah waxaa jira dhibaato xoogan oo hayada NISA ku hayso masuuliyiintii kasoo jeeday Gobolka Gedo,”.